Vovoka Urolithin B tsara indrindra （1139-83-9） Mpanamboatra sy ozinina
Cofttek no mpanamboatra vovoka Urolithin B tsara indrindra any Shina. Ny orinasanay dia manana rafitra fitantanana famokarana tanteraka (ISO9001 & ISO14001), miaraka amina famokarana isam-bolana 200kg.
Anarana simika: 3-Hydroxy-6H-dibenzo [b, D] pyran-6-ny iray
Formula simika: C13H8O3
Meny fitetezana 212.2 g / mol
Key InChi: WXUQMTRHPNOXBV-UHFFFAOYSA-N
Kaody SMILES: O=C1C2=CC=CC=C2C3=CC=C(O)C=C3O1
function: Ny urolithin B dia afaka manatsara ny fiasa mitochondrial sy hozatra.
Ny Urolithin B dia afaka manatsara ny tanjaka hozatra sy ny fiaretana mandritra ny fahanterana.
fampiharana: Urolithin B dia metabolista mikraoba tsinay amin'ny ellagitannis ary mampiseho fampahalemana mahery anti-oxidant sy pro-oxidant miankina amin'ny rafitra sy ny fepetra amin'ny assay. Urolithin B koa dia afaka mampiseho ny estrogen sy / na hetsika anti-estrogen.
Solubility: Solosaina mora foana ao amin'ny N, N-dimethylformamide sy dimethylmethylene. Sulfone, malefaka kely eo amin'ny methanol, ethanol, ary etil acetate
Storage Temp: Hygroscopic, -20 ° C Frizidera, ao anatin'ny atmosfera tsy misy dikany
Urolithin B Spectrum NMR
Fampidirana ny Urolithins
Ny urolithins dia metabolite faharoa amin'ny asidra ellagic azo avy amin'ny ellagitannins. Amin'ny olombelona, ​​ny ellagitannins dia novain'ny microflora tsinay ho asidra ellagic izay avadika ho urolithins A, urolithin B, urolithin C ary urolithin D ao amin'ny tsinaibe.
Urolithin A (UA) no metabolite be ellagitannins. Na izany aza, ny urolithin A dia tsy fantatra hitranga voajanahary amin'ny loharano ara-tsakafo rehetra.
Urolithin B (UB) dia metabolite be dia be novokarina tao amin'ny tsinaina tamin'ny alàlan'ny fanovana ellagitannins. Ny urolithin B no vokatra farany aorian'ny katolika voaforona urolithin hafa. Ny urolithin B dia hita ao amin'ny urine toy ny urolithin B glucuronide.
Urolithin A 8-Methyl Ether dia vokatra manelanelana mandritra ny synthesis of Urolithin A. Izy io dia metabolite faharoa amin'ny ellagitannin ary manana toetra antioksida sy anti-inflammatoire.
Mekanisma fiasan'ny urolithin A sy B
● Urolithin A dia mitarika mitophagy
Mitophagy dia endrika autophagy izay manampy amin'ny famongorana ny mitochondrial simba noho ny fiasan'izy ireo tsara indrindra. Ny Autophagy dia manondro ny fizotran'ny ankapobeny izay ahitàna ny votoatin'ny cytoplasmika ary lasa ahodivirana ary ny mitophagy dia ny fanimbana sy ny fanodikodinana ny mitochondria.
Mandritra ny fahanterana ny fihenan'ny autophagy dia lafiny iray mitarika amin'ny fihenan'ny asan'ny mitochondrial. Ankoatr'izay, ny fihenjanana azo avy amin'ny oksidana dia mety hitarika ho amin'ny autophagy ambany koa. Urolithin A dia manana fahaizana manafoana ny mitochondria simba amin'ny alàlan'ny autophagy mifantina.
Ny adin-tsaina oksizenina dia mitranga rehefa misy tsy fitandremana eo amin'ireo radia maimaim-poana sy ny antioxidant ao amin'ny vatana. Ireo radikaly mavesatra be loatra ireo dia matetika mifandray amin'ny aretina mitaiza maro toy ny aretim-po toy ny diabeta, diabeta ary homamiadana.
Ny Urolithins A sy B dia maneho ny fiantraikan'ny antioxidant amin'ny alàlan'izy ireo hampihena ny radicales gratis ary manokana ny haavon'ny karazana oxygen oxygen (ROS) intracellular ary koa manakana ny fitrandrahana lipid amin'ny karazana sela sasany.
Ankoatr'izay, ny urolithins dia afaka manakana ny anzima sasany amin'ny oxidizing, anisan'izany ny monoamine oxidase A sy tyrosinase.
● Toetran'ny anti-inflammatoire
Ny fivontosana dia dingana voajanahary izay iadian'ny vatantsika amin'ireo zavatra latsaka toy ny aretina, ny ratra ary ny mikraoba. Na izany aza, ny fivontosana maharitra dia mety hanimba ny vatana satria misy ifandraisany amin'ny aretina isan-karazany toy ny sohika, aretim-po ary homamiadana. Ny fivontosana maharitra dia mety hitranga noho ny fivontosana mahery vaika, aretina na koa radikaly afaka ao amin'ny vatana.
Ny urolithins A sy B dia mampiseho ireo toetra manohitra ny fivontosana amin'ny alàlan'ny fampiatoana ny famokarana nitrika oksida. Izy ireo dia misakana manokana ny proteinina nitric oxide synthase (iNOS) sy ny fanehoana mRNA izay tompon'andraikitra amin'ny fanorana.
● Vokatry ny fanoherana mikraoba
Ny mikraoba anisan'izany ny bakteria, holatra ary ny virosy dia mitranga amin'ny tontolo iainana ary na dia amin'ny vatan'olombelona. Na izany aza, ny mikraoba vitsivitsy antsoina hoe pathogens dia mety hiteraka areti-mifindra toy ny gripa, tràla ary tazo.
I Urolithin A sy B dia afaka mampiseho hetsika antimikroba amin'ny alàlan'ny fampiatoana ny fahatsapana ny kôlejy. Ny fijerena ny kôlejy dia fomba fiasa mifototra amin'ny bakteria izay ahafahan'ny bakteria mahita sy mifehy ireo dingana mifandraika amin'ny otrikaretina toy ny hatsaram-panahy sy ny antony manosika.
● Fanakanana ny glycation proteinina
Ny glycation dia manondro siramamy tsy mihetsika amin'ny siramamy na proteinina. Io dia biomarker lehibe amin'ny diabeta sy ny aretina hafa ary koa ny fahanterana.
Ny glycation avo ny proteinina dia fiantraikany faharoa amin'ny hyperglycemia fa manana anjara toerana lehibe amin'ny aretim-po mifandray amin'ny diabeta toy ny diabeta sy ny aretin'i Alzheimer.
Ny Urolithin A sy B dia manana fananana anti-glycative izay miankina amin'ny fatra izay miankina amin'ny hetsika antioxidant ataon'izy ireo.
Mahasoa ny Urolithin B
Ny famenony urolithin B dia manana tombony ara-pahasalamana marobe ary ny ankamaroany dia mitovy amin'ny tombony urolithin A.
(1) mety hanoherana ny homamiadana
Ny toetra manohitra ny fanaintainan'ny urolithin B dia mahatonga azy ho kandidà tsara hiadiana amin'ny homamiadana. Ny mpikaroka sasany dia nitatitra ireo mety ho fibroblasts, microfage ary sela endothelial.
Ny fandinihana dia nitatitra fa ny UB dia manakana ny homamiadana isan-karazany toy ny prostate, colon ary fivontosana.
Ao amin'ny fandinihana natao momba ny sela homamiadana sela, ny ellagitannins, ny ellagic asidra ary ny urolithins A sy B dia nohombana tamin'ny mety ho fanoherana ny homamiadana azy. Notaterin'izy ireo fa ny fitsaboana rehetra dia afaka manakana ny fitomboan'ny sela homamiadana. Izy ireo dia nanakana ny fihanaky ny sela homamiadana tamin'ny alàlan'ny fisamborana ny fihodinan'ny sela amin'ny ambaratonga samihafa ary koa amin'ny fanentanana ny apoptose.
(2) Afaka manampy amin'ny ady amin'ny adin-tsaina oxidative
Urolithin B dia manana fananana antioxidant tena tsara amin'ny alàlan'ny fampihenana ny haavon'ny karazana oksizenina mihetsika sy ny peroidididia lipida amin'ny karazana sela sasany. Ny haavon'ny ROS dia mifandraika amin'ny aretina maro toy ny aretin'i Alzheimer.
Nandritra ny fandinihana ny sela neuronal voan'ny adin-tsaina miatrika oxidative, ny suplementary urolithin B ary ny urolithin A dia hita miaro ny sela amin'ny fitrandrahana ka noho izany dia nitombo ny fahavelomana sela.
(3) Urolithin B amin'ny fanatsarana ny fitadidiana
Urolithin b dia notaterina hanatsarana ny fahatsentsenan-dra. Mampitombo ny fiasan'ny kognitif izany.
Ny fandinihana dia mampiseho fa ny urolithin B dia mety ho fampitomboana fahatsiarovana mety hitranga amin'ny fanatsarana ny fiasan'ny kognitifista amin'ny ankapobeny.
(4) Manakana ny fahaverezan'ny hozatra
Ny fahaverezan'ny hozatra dia mety hitranga noho ny antony maro samihafa toy ny fikorontanana, fahanterana ary ny tsy fahampian'ny proteinina ao amin'ny sakafo. Misy fepetra maromaro hampiatoana, hamerana na hanakana kokoa ny hozatra amin'ny hozatra, anisan'izany ny fampiasana fanatanjahan-tena, ny fanafody ary ny asidra amine ary ny polyphenol.
Ny urolithins dia azo sokajiana ho polyphenol ary mitana anjara toerana hisorohana ny fahaverezan'ny hozatra amin'ny alàlan'ny fampandehanana ny synt synt proteinina hozatra ary koa mihena ny fanimbana.
Nandritra ny fanadihadiana niaraka tamin'ny totozy, ny fanampin-tsakafo Urolithin B izay nitantana mandritra ny fotoana maharitra dia hita fa hampivoatra ny hozatrain'izy ireo satria hita fa mihalehibe.
(5) Urolithin B miady amin'ny fivontosana
I Urolithin B dia manana fananana manohitra ny fivontosana amin'ny alàlan'ny fihenan'ny marika amin'ny ankabeazan'ny fanaintainana.
Ao amin'ny fandinihana ny voalavo voan'ny fibrosis renalambo, ny urolithin B dia hita fa ameliorate ny ratra amin'ny voa. Nanatsara ny fiasan'ny renal, ny moroloolo ny zaza ary koa mampihena ireo marika amin'ny ratra. Midika izany fa ny UB dia nahafahana nanalefaka ny fanaintainan'ny renal.
(6) Tombontsoa syolojika an'ny urolithin A sy B
Ny vokatra synergistic dia notaterina ihany koa tamin'ny fitambaran'ny urolithin A sy B amin'ny fiasa sy ny fahaizan'ny kognita. Ny fandinihana dia nanambara fa ity fitambarana ity dia azo ampiasaina amin'ny fitsaboana na fisorohana aretina mikorontan-tsaina dementia toy ny fanahiana na aretin'i Alzheimer.
Ny tombontsoa hafa mifandraika amin'ny urolithins dia;
Aretina metabolika ameliorates
Loharano sakafo Urolithin A sy B
Urolithins dia tsy fantatra ho hita voajanahary ao anaty loharanon-tsakafo rehetra. Izy ireo dia vokatry ny fiovan'ny asidra ellagic izay nalaina avy amin'ny ellagitannins. Ny Ellagitannins dia ovaina ho asidra ellagic azon'ny microbiota tsinay ary ny asidra ellagic dia avadika ho metabolisma (urolithins) ao anaty tsinay lehibe.
Ny Ellagitannins dia mipoitra voajanahary amin'ny loharano sakafo toy ny ampongabendanitra, voaroy, frezy, voaroy, blackberry, voaloboka muscadine, amandy, guavas, dite, ary voanjo toy ny kennuts sy chestnuts ary koa zava-pisotro antitra oak, ohatra, divay mena sy whisky avy any barila oaka.
Azontsika atao ny mamintina ny sakafo urolithin A ary ny sakafo urolithin B dia sakafo manankarena ellagitannin. Tsara ny manamarika fa ny bioavailability ellagitannin dia tena voafetra raha ny metabolite faharoa (urolithins) kosa dia mora azo ovaina.
Ny fitrandrahana urolithins sy ny famokarana dia miovaova be amin'ny tsirairay satria ny fiovam-po avy amin'ny ellagitannins dia miankina amin'ny microbiota ao amin'ny tsinainy. Misy bakteria manokana tafiditra ao anatin'ireny fiovam-po ireny ary miovaova arakaraka ny olona izay misy mikraoba ambony na ambany na tsy misy. Ny loharanom-tsakafo dia miovaova ihany koa amin'ny haavon'ny ellagitannins. Noho izany ny tombony mety ho azon'ny ellagitannins dia miovaova amin'ny olona iray mankany amin'ny iray hafa.
Famenon'ny Urolithin A sy B
Ny famenony urolithin A ary koa ny famenony Urolithin B dia mora hita eny an-tsena ho toy ny famenon-tsakafo manankarena ellagitannin. Ny famenon-tsakafo urolithin A dia mora azo ihany koa. Ny ankamaroan'ny ampongabendanitra dia amidy am-pahombiazana ary ampiasaina amin'ny fahombiazana. Ireo famenon-tsakafo ireo dia foronina avy amin'ny voankazo na voanjo ary atsangana ho endrika ranoka na vovoka.
Noho ny fiovan'ny ellagitannins mifantoka amin'ny sakafo isan-karazany, ny mpanjifa urolithin a dia mividy izany amin'ny fandinihana ny loharanon-tsakafo. Toy izany koa no mihatra rehefa mitroka vovo-urolithin B na famenon-tsakafo.
Ny fanadihadiana vitsivitsy nataon'ny olombelona natao tamin'ny vovony urolithin A na B dia tsy nitatitra ny voka-dratsy ateraky ny fitantanana ireo fanampiana ireo.
Garcia-Muñoz, Cristina; Vaillant, Fabrice (2014-12-02). "Lahatra metabolic an'ny Ellagitannins: fiantraikany amin'ny fahasalamana, ary ny fomba fijerin'ny mpikaroka sakafo ara-nofo vaovao". Hevitra manakiana amin'ny siansa sy ny sakafo mahavelona.
Bialonska D, Kasimsetty SG, Khan SI, Ferreira D (11 Novambra 2009). "Urolithins, metabolite microbial tsinay ao amin'ny ellagitannins Pomegranate, dia mampiseho fihetsiketsehana mahery fiasa mahery vaika ao anaty fitsapana miorina amin'ny sela". J Agric Sakafo Chem.
Bodwell, Graham; Pottie, Ian; Nandaluru, Penchal (2011). "Ny valin'ny diaben'ny fangatahana elektronika miorina amin'ny alika amin'ny alàlan'ny Urolithin M7".